Turkiga Oo War Kulul Kasoo Saaray Qaraxyadii Muqdisho, Boosaaso Iyo Weerarkii Baraawe – WARSOOR
TURKIGA – (WARSOOR) – Dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaareeysay qaraxyadii ka kala dhacay Magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho iyo weerarkii loo adeegsaday madaafiicda ee maalin kahor lagu weeraray Magaalada Baraawe.
Qoraal kasoo baxay Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay inay ka xun yihiin qaraxyada iyo weerarka madaafiicda ee 9-10kii Febraayo 2022 ka kala dhacay, Boosaaso, Muqdisho iyo Baraawe, kuwaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah.
Turkiga ayaa tacsi u diray dowladda Soomaaliya iyo qoysaska dadkii ku geeriyooday qaraxyada iyo weerarkii dhacay, iyagoona dadka dhintay Alle uga baryay inuu u naxariisto, waxaana dadka dhaawacmay ay u rajeeyeen Caafimaad Deg-deg ah
Cambaareyneynaa weeraradaas foosha xun ee argagixisanimo oo 9 iyo 10kii Febraayo ka kala dhacay magaalooyinka Baraawe, Boosaaso iyo Muqdisho ee Soomaaliya. waxaana tacsi u direynaa shacabka iyo dowladda Soomaaliya ee walaalaha ah” ayaa lagu yiri Qoraalka Safaaradda.
Ugu yaraan11 qof ayaa ku dhimatay, halka 25 qof kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadii Boosaaso iyo midkii Is-miidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay Isgoyska Ceel-gaabta ee Muqdisho, iyo weerarkii madaafiicda ee lagu qaaday Baraawe, Al-shabaabna ayaa sheegatay mas’uuliyadooda.
Ra’iisul wasaare Rooble oo kulan la qaatay Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya